के तपाईलाई थाहा छ मूल एसईओ र भिडियो सामाग्री अप्टिमाइजेसनले के काम गर्दछ?
भिडियो सामग्री अब अधिक र अधिक आवश्यक हुन्छ, विशेष गरी पूर्ण-स्ट्याक अनलाइन मार्केटिंग रणनीतिको बारेमा. प्रत्येक वेबपृष्ठमा सम्मिलित जानकारीपूर्ण भिडियोहरूमध्ये सबै भन्दा शक्तिशाली स्पटहरूमध्ये, मैले पहिलो फाईल देख्छु, जस्तै अधिक सवारी चलाउदै, राम्रो ग्राहक जागरूकताको साथ अधिक विश्वसनीय ब्रान्ड नाम प्राधिकरणको निर्माण, र अन्तमा सबै अनलाइनका लागि अधिक आय उत्पन्न क्षमता.
प्राय: सामान्यतया, भिडियोको सामग्री केवल सामाजिक सञ्जालसँग यसको आफ्नै तरिकासँग सम्बन्धित छ।. तर यो विश्वास गर्न एक ठूलो गल्ती हो. हो, निस्सन्देह, चहचहाना, फेसबुक, साथ नै YouTube आफु-हेर्ने प्रोमोशनल भिडियो राख्नका लागि उत्कृष्ट चीजहरू हुन्. यी सबै प्लेटफार्महरू प्रयोग गर्ने सिद्ध सिद्ध र आदर्श उपयुक्त छन्. तर यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भन्दा बढी आउँछ - यदि एसईओ र भिडियो सामग्री बीचको ठोस सम्बन्ध छ भने? जस्तै आज खोज अनुकूलन सामग्री परे परे धेरै पहलुहरु लाई कवर गर्दछ. वास्तवमा, खोजी ईन्जिनियरिङ्को दृष्टिकोणबाट एक अनुकूलित भिडियो सामग्रीको गुणस्तरको सामग्री जस्तै छ, तर यसको थप व्यक्तिगत मार्गमा. तल छोटो विचार आउँछ - के एसईओ र भिडीयो सामग्री ह्यान्ड आएर हातमा आउन आवश्यक छ भने अझ बढि कार्बनिक ट्राफिक लाई सामान्यतया योग्य नेतृत्वमा ल्याउन सकिन्छ? वा अझै पनि यो केही छैन? ठीक छ, म यहाँ मजाकिरहेको छु. मेरो लागि, मेरो एसईओ मा रहेको एक मानक आवश्यकता हो र भिडियो एकदम साथ एकीकृत संग भिडियो सामाग्री एक पहिले देखि नै पहिले देखि नै एक मामला को एक अत्यंत आकस्मिक अवस्था बनिरहेको छ. म प्रमाणित गर्न जाँदैछु कि म यसको बारेमा ठीक छु. तल मैले तपाईंको अनलाइन व्यापारको लागि अधिकतम क्षमताको साथ सानो भिडीयो अप्टिमाइजेसन गर्नका लागि केहि विश्वसनीय सल्लाहहरू देखाउनेछु.
हामीले सुरू गर्नुअघि, एक सरल सुझाव बुझ्न दिनुहोस् - वेबपेज SEO र भिडियो सामग्री अप्टिमाइजेसन धेरै समान छन्, तर अझै पनि समान छैन. लेखनमा मौलिक सामग्री जस्तै, भिडीयो Google द्वारा गुणस्तरको सामग्री र बलियो ब्याकलिङ्कको संख्या द्वारा क्रमबद्ध गरिएको छ. चलो मेरो पूर्व अनुभव को केहि समान प्रकृति को राम्रो उपयोग गर्न को लागी आउछ.
सबै भन्दा पहिले, चलो भिडियो ट्रान्सक्रिप्शनको साथ अगाडि बढ्नुहोला. तपाईंको वेब पेजमा एक लिङ्क गरिएको भिडियो सामग्रीको लागि राम्रो हुनेछ सबैका लागि: वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूले उच्च रूपांतरणको लागि विशुद्ध रूपमा सम्बन्धित र आकर्षक डेटाको आनन्द लिन्छन्, जबकि खोज इञ्जिनले प्राय: SERP हरूमा राम्रो रैंकिङको साथ पुरस्कार प्रदान गर्ने सम्भव छ।. यस तरिका अभिनय, हामी आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गर्न को लागी क्रलरहरू "पढ" भिडियो सामग्री त्यहि तरिकामा मद्दत गर्न को लागी जस्तै यदि यो लेखनको एक साधारण टुक्रा थियो. तपाईंलाई पूर्ण शब्द ट्रान्सक्रिप्टको साथ आवश्यक पर्दछ, साथसाथै प्रत्येक भिडियोको लागि पाठ हाइलाइटहरू तपाइँ होस्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. त्यसो गर्न, म मोज द्वारा बनाईएको यस क्षेत्रमा योग्य अनुभवको प्रयोग गर्दछु (केवल शुक्रबार शुक्रबारमा उनीहरूको उत्कृष्ट भिडियोहरू हेर्नुहोस्). तपाईं राम्रो तरिकाले राम्रो पोडकास्ट ब्राउज गर्न सक्नुहुनेछ कि अन्य उद्योगका नेताहरूले सजिलै संग र सजिलै इन्टरनेटमा भेट्टाउन सक्नुहुनेछ.
अन्तमा, भिडियोहरूको लागि मेटाडेटा अनुकूलन गर्न तल आउनुहोस्. मैले पहिले नै भनें, विशेष रूप देखि एसईओ र भिडियो अनुकूलन कार्य को यो पहलू धेरै एकजुट हो Source . तपाईंको भिडियो विवरणहरू, साथै प्रत्येक शीर्षक:
को लागि अधिक सम्मोहक र स्वागत छ तपाईंको वेब पेज सामग्रीको लागि विशुद्ध प्रासंगिक र प्राकृतिक
) केवल सही खोजशब्दों संग तपाईंको बजार आला या लक्षित दर्शक
मेटा विवरण 155 वर्णहरु
आँखा को पकडने वाला शीर्षक 55 अक्षरहरु